Shiinaha jilicsan warshadaha SOO SAARKA warshad iyo alaableyda | Feiqing
SAMEYSADA SOOXAALADA PLYO
Ma waxaad raadineysaa mid ka mid ah qaybaha ugu wanaagsan ee qalabka jimicsiga ee jimicsiga jimicsiga ee suuqa? Raadintaadu way dhammaatay oo jimicsigaaga xad-dhaafka ahi wuxuu ka bilaabmaa FEIQING Fitness 3-in-1 Box xumbo Plyometric Box. Feiqing Fitness-waajibaadka Foam Plyometric Box waa qalabka isku dheelitiran ee aad u baahan tahay si aad u kordhiso boodhadhkaaga sanduuqa, sanduuqa riixista, qashin-qubka, tallaabada, iyo layliyo kale oo hal abuur leh. U adeegso jimicsigaaga tababarka iskutallaabta, garaashkaaga, ama jimicsiga si aad u hesho jimicsi aerobic ah oo aan waligeed dhicin. Haddii jimicsigu aad ufududyahay dhanka "20", si fudud u wareeji sanduuqa si aad ugu darto 4 "- 10". Tani waxay kugu qasbeysaa inaad kor u booddo oo aad gubato kalooriyado badan adoo hagaajinaya toosnaantaada! Sanduuqyadan waxaa laga dhisay xumbo aad u tiro badan waxaa loo dhisay inay socdaan illaa saacadahaas dheer ee tababarka jirdhiska.
GOLE LOO BAAHAN YAHAY: Sanduuqan loo yaqaan 'plyometric box', ma jiro kulan loo baahan yahay. Ka soo bixi xirmada oo diyaar ayey u tahay inay tagto sida ugu dhakhsaha badan ee aad tahay. Iyada oo la adeegsanayo naqshad fudud laakiin hufan, waa waqtigii aad jimicsigaaga ugu qaadi lahayd heerka xiga.
Sanduuqayaga xumbada plyo wuxuu ka samaysan yahay daboolka PVC oo leh jiinyeer YKK, oo ka buuxsamaya sanduuqa alwaaxda iyo xumbada EVA. Waxaan sidoo kale sameyn karnaa EPE iyo xumbo cufnaan sare leh, miisaanka halkii gogol ayaa la habeyn karaa.
- Xumbada adag ee heeganka ah + sanduuqa alwaax.
- Maaddada jilicsan waxay ka hortagtaa dhaawaca.
- Dusha simbiriirixan.
- Kulan looma baahna.
Foam Plyometric Boxes waa kuwo ku filan oo ay ku fuliyaan dhaqdhaqaaqyada plyometric, laakiin jilicsan oo ku filan oo ayan dhaawici doonin dhalaalkaaga haddii aad seegto.
- Guud ahaan Dhererka: 20-in.
- Baaxadda Guud: 24-in.
- Dhererka Guud: 30-in.
- Waxyaabaha: PVC + SANDUUQA WOODEN + EVA FOAM AMA EPE + xumbo cufnaan sare leh.
MUHIIM: Sanduuqyada Xumbada Xumbo WAA IN aan loo isticmaalin sagxad kasta oo siman (alwaax, shub siman, leben, iwm).
Xuddunta sanduuqa alwaaxda oo leh jilicsan EVA jilicsan dhammaan dhinacyada 6 oo lagu daboolay vinyl culus.
Sanduuqyada sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa ciyaartooyda ka shaqeyneysa hagaajinta qoto dheer ee jilibkooda ama cayaartoyda u baahan calaamado taabasho ah si ay u bartaan halka booskooda ugu hooseeya ay ahaan doonaan iyaga oo aan gebi ahaanba ka soo dejin silsiladda dambe.
Hore: Kubadda darbiga
Xiga: Kubadda PVC slam
Xumbo Box Box
Sanduuqa Soft Plyo
Birta sanduuqa plyo
Xayiraadaha EVA Jerk
3 ku jira 1 Wood Plyo Box oo loogu boodo